The na-ekwusa Rodney Howard-Browne nwere ike ikpe mkpọrọ n'ihi mpụ megide corona iwu
Ize ndụ nke ịbụ ikpe ruo 60 ụbọchị n'ụlọ mkpọrọ ma a mma nke $ 500.
Rodney Howard-Browne bụ nke mbụ ozi United States n'ihe ize ndụ nke ikpe maka mpụ megide corona Act.
Mebiri corona iwu
Rodney Howard-Browne a kasị mara amara dị ka na-ekwusa bụ onye na-na-akpọ na-achị ọchị revival na Sweden na 1990s ize ndụ a na- ikpe ruo 60 nga ụbọchị na fined $ 500 maka inwe haziri nzukọ chọọchị ya na narị ndị ọbịa na abụọ dị iche iche ugboro, n'agbanyeghị na ndị ọchịchị 'corona ban na collections na ihe karịrị mmadụ iri.
First pastọ ndị n'ihe ize ndụ ikpe maka mpụ megide corona Act
Rodney Howard-Browne chọọchị kpọrọ The River bụ bụghị nanị na chọọchị na United States na-eguzogide ndị ọchịchị site n'ime ndokwa nzukọ na ọtụtụ na-ekere òkè na-anọghị n'ụlọ site online dị ka ọtụtụ ọgbakọ ndị ọzọ. Ma Rodney Howard-Browne bụ nke mbụ ozi United States onye ize ndụ ikpe maka mpụ megide corona Act .
A US akụkọ ahụ pụtara na otu onye n'ime iri America na-ekwu na ha ọgbakọ dị iche iche ga-anọgide na-eme ememe Sunday ọrụ dị na mbụ na chọọchị, n'agbanyeghị na ndị ọchịchị 'ban na collections na ihe karịrị mmadụ iri.